မိန်းကလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်း – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်း
Posted on May 2, 2018 by Wint
ချစ်ကြတယ်.. အချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့ နားလည်မှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ရင်းနှီးပြီး နာကျင်နေလည်း ချစ်ဖူးတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးစိတ်ရှည်သည်းခံစွာနေရင်း နှစ်ရှည်လများစွာခိုင်မြဲနေတဲ့ အတွဲတွေလည်းရှိသလို တစ်ချို့ ကလည်း စိတ်ချင်းမတူရင် ၊ အတွေးချင်းမတူရင် ၊ အကျင့်စရိုက်တွေမတူရင် လူတစ်ယောက်ကိုစွဲလမ်းမနေပဲ ထားသွားတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဘာမှသွေးမတော် ၊ သားမစပ် သူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုချစ်ရတာ ၊ အချိန်တွေပေးရတာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း ပါးစပ်ကနေလေနဲ့ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဆိုပေမယ့် စိုးရိမ်မှုတွေ၊ ပူပန်မှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေ အများကြီး
ပါနေပြန်တယ်။ ဟုတ်ပါပြီ… တကယ်တော့ အားလုံးက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အရမ်းနောက်ကျမသေးခင် နောက်ပြန်လှည့်ချင်တယ်ဆို ၊ မှီနိုင်သေးတယ်ဆို တကယ်လည်းချစ်သေးတယ်ဆို၊ သူကလည်း သင့်အပေါ် ချစ်နေသေးတယ်ဆို ချစ်ရက်နဲ့ ကျောခိုင်းနေတာမျိုးတွေ၊ တလွဲမာနထားတာတွေ ခေါက်ထားလိုက်ပါ။ လူ့သက်တမ်းက တိုတိုလေးရယ်။ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့  မိန်းကလေးတွေ ချစ်ရက်နဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို သူတို့ထားသွားကြတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
သူမသင့်ကို လိုအပ်နေချိန် သင့်မှာသူမအပေါ် နွေးထွေးမှုမရှိခြင်း ၊ စိတ်သက်သာရာရအောင် မလုပ်ပေးတာမျိုးတွေက သူမကိုတန်ဖိုးမထားသလို ၊ နွေးထွေးလုံခြုံမှုမပေးသလိုဖြစ်စေပြီး သူမဘဝမှာ စိုးရိမ်စရာတွေ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေကိုပိုဖြစ်စေပါတယ်။
အရမ်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုရင်တောင် သမ္မတလောက်တော့ သင်အလုပ်မရှုပ်နိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားတောင် သူ့မိန်းမကိုချစ်ပြဖို့ ၊ ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်တစ်ခုဖဲ့ပေးနိုင်လေရဲ့။ တကယ်တော့ ချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ကိုဖုန်းတစ်ချက်မဆက်နိုင်ရင်တောင် ချစ်ကြောင်း ၊ သတိရကြောင်း စာတိုလေးပို့လိုက်တာဟာ စက္ကန့်ပိုင်းတောင်မကြာပါဘူး။ တစ်ဖက်သားလည်း စိတ်ကျေနပ်သွားသလို နှစ်ယောက်ကြား ဆက်ဆံရေးကို ချောဆီလောင်းလိုက်သလိုပါပဲ။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ ချစ်ရက်နဲ့ဝေးကွာသွားအောင် တွန်းထုတ်သလိုတွေ ဖြစ်သွားကြတာပါ။
ကိုယ်ချစ်လို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အခြား မိန်းကလေးတွေနဲ့လိုက်မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဘယ်သူမှကိုယ့်ကို သူများနဲ့လိုက်နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ သူမ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ၊ဆိုးသည်ဖြစ်စေ အားလုံးကို သင်လက်ခံ အသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာ သိအောင်ပြမှ သူမလည်း စိတ်ထဲ နေသာမှာပါ။
တစ်ချိန်လုံး ဖုန်းပြော၊ စာပို့ လုပ်စရာရှိတာလည်း မလုပ်ရ၊ ဒီအချစ်ရေးကိစ္စနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေရင် အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲ ? တစ်ခုခုဆို သင့်ကိုပဲ သူမရဲ့အချိန်တွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အတ္တထားနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သူမမှာလည်း အသိုင်းဝိုင်း ၊ သူငယ်ချင်း ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ လေ့လာစရာတွေ၊ ဝါဿနာပါရာအလုပ်တွေလုပ်စရာရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို သင်နားမလည်ပေးနိုင်ရင် သူမမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး သင့်ကိုစွန့်ခွာသွားပါလိမ့်မယ်။
ရိုးသားမှုက အကောင်းဆုံးမူ့​ဝါဒတစ်ခုပါပဲနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်တိုင်းပြောပြပါ။ လိမ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူမရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပေါ့ ။ မင်းလည်း လိမ်တာမကြိုက်သလို သူမလည်း ဘယ်ကြိုက်မလဲ !
ယုံကြည်မှုက Rs မှာ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ယုံကြည်မှုမရှိရင် တစ်ချိန်လုံး သံသယတွေနဲ့ သင်ပူလောင်ရပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ… ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်မျက်ကွယ်ရာမှာတောင် စိတ်မချရတဲ့လူမျိုးဆို ဘာလုပ်တော့မှာလဲ ? တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲခံပြီးပဲ နေသွားတော့မှာလား ?
ခဈြကွတယျ.. အခြိနျကွာမွငျ့စှာနဲ့ နားလညျမှုတှေ၊ ယုံကွညျမှုတှေ ရငျးနှီးပွီး နာကငျြနလေညျး ခဈြဖူးတဲ့လူတှခေညျြးပါပဲ။ ဒီလိုမြိုးစိတျရှညျသညျးခံစှာနရေငျး နှဈရှညျလမြားစှာခိုငျမွဲနတေဲ့ အတှဲတှလေညျးရှိသလို တဈခြို့ ကလညျး စိတျခငျြးမတူရငျ ၊ အတှေးခငျြးမတူရငျ ၊ အကငျြ့စရိုကျတှမေတူရငျ လူတဈယောကျကိုစှဲလမျးမနပေဲ ထားသှားတတျကွပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ဘာမှသှေးမတျော ၊ သားမစပျ သူစိမျးတဈယောကျကိုခဈြရတာ ၊ အခြိနျတှပေေးရတာ လှယျတော့မလှယျဘူး။ ခဈြတယျဆိုတာလညျး ပါးစပျကနလေနေဲ့ပဲပွောလိုကျရတယျဆိုပမေယျ့ စိုးရိမျမှုတှေ၊ ပူပနျမှုတှေ၊ နာကငျြမှုတှေ အမြားကွီး
ပါနပွေနျတယျ။ ဟုတျပါပွီ… တကယျတော့ အားလုံးက ရှငျးရှငျးလေးပါ။ အရမျးနောကျကမြသေးခငျ နောကျပွနျလှညျ့ခငျြတယျဆို ၊ မှီနိုငျသေးတယျဆို တကယျလညျးခဈြသေးတယျဆို၊ သူကလညျး သငျ့အပျေါ ခဈြနသေေးတယျဆို ခဈြရကျနဲ့ ကြောခိုငျးနတောမြိုးတှေ၊ တလှဲမာနထားတာတှေ ခေါကျထားလိုကျပါ။ လူ့သကျတမျးက တိုတိုလေးရယျ။ ခဈြတဲ့သူနဲ့ ပြျောရှငျစှာနထေိုငျလိုကျပါ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့မိနျးကလေးတှေ ခဈြရကျနဲ့ယောကျြားတဈယောကျကို သူတို့ထားသှားကွတာ ဘာကွောငျ့လဲ ?
သူမသငျ့ကို လိုအပျနခြေိနျ သငျ့မှာသူမအပျေါ နှေးထှေးမှုမရှိခွငျး ၊ စိတျသကျသာရာရအောငျ မလုပျပေးတာမြိုးတှကေ သူမကိုတနျဖိုးမထားသလို ၊ နှေးထှေးလုံခွုံမှုမပေးသလိုဖွဈစပွေီး သူမဘဝမှာ စိုးရိမျစရာတှေ၊ ဝမျးနညျးစရာတှကေိုပိုဖွဈစပေါတယျ။
အရမျးအလုပျရှုပျပါတယျဆိုရငျတောငျ သမ်မတလောကျတော့ သငျအလုပျမရှုပျနိုငျပါဘူး။ အမရေိကနျ သမ်မတ အိုဘားမားတောငျ သူ့မိနျးမကိုခဈြပွဖို့ ၊ ဂရုစိုကျဖို့ အခြိနျတဈခုဖဲ့ပေးနိုငျလရေဲ့။ တကယျတော့ ခဈြတယျဆိုရငျ သူ့ကိုဖုနျးတဈခကျြမဆကျနိုငျရငျတောငျ ခဈြကွောငျး ၊ သတိရကွောငျး စာတိုလေးပို့လိုကျတာဟာ စက်ကနျ့ပိုငျးတောငျမကွာပါဘူး။ တဈဖကျသားလညျး စိတျကနြေပျသှားသလို နှဈယောကျကွား ဆကျဆံရေးကို ခြောဆီလောငျးလိုကျသလိုပါပဲ။ ဘာမှမဟုတျတဲ့ကိစ်စလေးတှနေဲ့ ခဈြရကျနဲ့ဝေးကှာသှားအောငျ တှနျးထုတျသလိုတှေ ဖွဈသှားကွတာပါ။
ကိုယျခဈြလို့ ရှေးခယျြထားတဲ့ မိနျးမတဈယောကျကို အခွား မိနျးကလေးတှနေဲ့လိုကျမနှိုငျးယှဉျပါနဲ့။ ဒါဟာ မိနျးကလေးမှမဟုတျပါဘူး။ ယောကျြားလေးလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ဘယျသူမှကိုယျ့ကို သူမြားနဲ့လိုကျနှိုငျးယှဉျပွီးပွောတာကို မကွိုကျကွပါဘူး။ သူမ ကောငျးသညျ ဖွဈစေ၊ဆိုးသညျဖွဈစေ အားလုံးကို သငျလကျခံ အသိမှတျပွုတယျဆိုတာ သိအောငျပွမှ သူမလညျး စိတျထဲ နသောမှာပါ။
တဈခြိနျလုံး ဖုနျးပွော၊ စာပို့ လုပျစရာရှိတာလညျး မလုပျရ၊ ဒီအခဈြရေးကိစ်စနဲ့ပဲ အခြိနျကုနျနရေငျ အလုပျဘယျလိုလုပျတော့မလဲ ? တဈခုခုဆို သငျ့ကိုပဲ သူမရဲ့အခြိနျတှပေေးရမယျဆိုတဲ့ အတ်တထားနလေို့မဖွဈပါဘူး။ သူမမှာလညျး အသိုငျးဝိုငျး ၊ သူငယျခငျြး ၊ အလုပျကိစ်စတှေ၊ လလေ့ာစရာတှေ၊ ဝါဿနာပါရာအလုပျတှလေုပျစရာရှိပါတယျ။ ဒါတှကေို သငျနားမလညျပေးနိုငျရငျ သူမမခံနိုငျတော့တဲ့အဆုံး သငျ့ကိုစှနျ့ခှာသှားပါလိမျ့မယျ။
ရိုးသားမှုက အကောငျးဆုံးမူ့​ဝါဒတဈခုပါပဲနျော။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အမှနျတိုငျးပွောပွပါ။ လိမျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ သူမရဲ့ယုံကွညျမှုတှကေို ရိုကျခြိုးလိုကျတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကိုယျခငျြးစာကွညျ့ပေါ့ ။ မငျးလညျး လိမျတာမကွိုကျသလို သူမလညျး ဘယျကွိုကျမလဲ !
ယုံကွညျမှုက Rs မှာ အရေးကွီးဆုံးပါပဲ။ ယုံကွညျမှုမရှိရငျ တဈခြိနျလုံး သံသယတှနေဲ့ သငျပူလောငျရပါတယျ။ စဉျးစားကွညျ့ပါ… ကိုယျမရှိတဲ့အခြိနျ၊ ကိုယျ့မကျြကှယျရာမှာတောငျ စိတျမခရြတဲ့လူမြိုးဆို ဘာလုပျတော့မှာလဲ ? တဈသကျလုံး စိတျဆငျးရဲခံပွီးပဲ နသှေားတော့မှာလား ?
မေလ(၁၈)ရက်နေ့ဆို ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ” 13 Reasons Why ” Season 2